साडीमा दुर्गेश ! ‘बिच्च बिच्चमा–३ बेसार’ (भिडियो सहित) | eAdarsha.com
साडीमा दुर्गेश ! ‘बिच्च बिच्चमा–३ बेसार’ (भिडियो सहित)
पछिल्लो समय चर्चामा रहेका गायक दुर्गेश थापाको तीज गीत बेसार ‘बिच बिचमा–३’ सार्वजनिक भएको छ ।
गत बर्षको तीजमा ‘हामी पनि नाँच्नुपर्छ बिच्च बिच्चमा’ बोलको गीतले निकै चर्चा बटुलेपछि उनले यो वर्ष फरक शैलीमा तीजका गीतहरु ल्याएका छन् ।
उनले असारको दोस्रो हप्तामा मात्रै ‘बिच्च बिच्चमा –२’ सार्वजनिक गरेर निकै चर्चामा पाएका थिए । जसमा राजनितिक गतिविधि, कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण परेको समस्यालाई शब्दबाट व्यक्त गरिएको थियो ।
वसन्त थापाको शब्द तथा सङ्गीतमा निर्माण भएको ‘बेसार बिच्च बिच्चमा’ गीतमा दुर्गेश थापाको स्वर सुन्न सकिन्छ । जसलाई कृष्ण विकले ऐरेन्ज गरेका हुन् ।
तीजको भाकामा तयार पारिएको उक्त गीतमा नेपालको राजनितिक अवस्था, कोरोना भाइरस र रोकथाममा देखिएको सरकारको लापरबाहीलाई ब्यङ्ग्य गरिएको छ । त्यो सँगै सरकारले बेसार पानीको बारेमा गरेको अभिव्यक्तिलाई पनि व्यङ्ग्य गरिएको छ ।
यो सँगै उक्त म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्ने सबै कलाकारलाई साडिको पहिरनमा नाचेको देख्न सकिन्छ । जसकारणले गीत सार्वजनिक हुनु भन्दा पहिल्यै साडि लगाएको फोटो सामाजिक संञ्जालमा निकै भाइरल भएको थियो ।
इनाक्षी इन्टरटेन्मेन्टले प्रस्तुत गरेको म्युजिक भिडियोलाई काजिस श्रेष्ठले निर्देशन र मिलन विश्वकर्माले सम्पादन गरेका हुन् ।
भिडियोमा दुर्गेश थापा, जिबि चिरन, चिरन्जिबी साप्कोटा, काजिस श्रेष्ठ, जीवन साहिनी क्षेत्री, लोमस शर्मा, सन्तोष बानियाँ, प्रेम खड्का रहेका छन् ।